Zvuva Chain, Cable Carrier, Energy Chain - Anjie
MT dzakatevedzana (From 5mm * 5mm - 60mm * 300mm)
MTK akatevedzana (From 20mm * 30mm - 65mm * 300mm)
SK akatevedzana (From 25mm * 38mm - 45mm * 150mm)
VMTK akatevedzana (From 25mm * 30mm - 80mm * 300mm)
KJ akatevedzana (10mm * 6mm & 10mm * 16mm)
VSK akatevedzana (From 18mm * 30mm - 45mm * 100mm)
Tub akatevedzana (From 40mm * 50mm - 50mm * 100mm)
MTS dzino (From 35mm * 50mm - 45mm * 250mm)
chiratidzo redu saka matambudziko kuti vanoshandisa zvedu uye kunze mutengo kuti vatengi dzedu. Quality uye basa iri yevasungwa redu nokusingaperi.
Tinotarisa zvakanaka basa. Sales kubvunza basa uye pashure okutengesa basa. Tinovavarira kugovera nenguva uye mashoko akarurama vose vatengi edu kana vaenzi.
Quality rokutanga pfungwa dzedu. Tinoisa asati kukosha mune unhu achidzora. Panguva iyoyo tiri kuedza zvokuvapfuura kudzora mutengo yedu mukati musoro dzose.
Tine makore anopfuura 13 Zvakaitika kugadzirwa zvuva cheni, muperekedzi njanji dzinodzvova kufukidza zvinhu zvenaironi chemarata dzinodzvova nenyere uye anoenderana zvigadzirwa.
Shijiazhuang zvatinogadzira hazvigoni kunyatsotevedzera zvinoita kambani chinosimbiswa kubva 2008. Tine makore anopfuura 13 Zvakaitika kugadzirwa zvuva cheni, muperekedzi njanji dzinodzvova kufukidza zvinhu zvenaironi chemarata dzinodzvova nenyere uye anoenderana zvigadzirwa. zvigadzirwa yedu pfungwa waya dziviriro, njanji vakadzivirirwa reciprocating zvitange.
Tine vashandi vanenge 100 uye fekitari yedu iri muna Yanshan County pamusoro Hebei dunhu, uye akasimuka anenge 6500 mativi metres 'kugadzirwa nharaunda. hofisi yedu riri Shijiazhuang guta, pamwe vanenge 300 mativi mamita 'nzvimbo. Zviri pamusoro 400 churu metres kubva Beijing kuti nzvimbo.
Achitsigirwa vatengi edu kubva kunze uye nezvipfuwo, uye kutamburira kwemakore 13 nokuchengeta kuwedzera pamusoro chigadzirwa yepamusoro uye chigadzirwa basa, tiri kuwana zvakawanda uye simba zvikuru kuti ive unyanzvi ari waya uye muperekedzi njanji kuchengetedzwa indasitiri.
ShanghaiTex 2019 exibition kutsigirwa 2019.11.25
Customer vaibvunza pamusoro mutakuri waya. Kufambisa mashoko divi uye kugadzwa nokuda ...
100 metres kumabvazuva mhesano pakati 307 National ebetsero mugwagwa uye Tianshan mumugwagwa, yepamusorosoro rokufambira, Shijiazhuang.
Siya A SHOKO
Electrical Cable Chain, Cable achizvuzvurudza Chain , Cable Chain , CNC Cable achizvuzvurudza Chain , Plastic Cable vachikweva Chain, Cable Wire Chain,